सबैलाई भावुक बनाउँने श्रीकृष्णको सम्झनाका लागि स्वेताका यी शब्द – Hot Post News
काठमाडौ । नेपाली सिनेमा क्षेत्रमा नायिका , निर्मात्री र सामाजिक अभियन्ता समेत रहेकी स्वेता खड्काले आफनो जीवनको कालो प्रहरलाई काटेर नयाँ जीवन बाँचिरहेकीछिन् । बिवाह गरेको एक महिनामा नै आफनो श्रीमान गुमाएकी स्वेताले श्रीकृष्ण श्रेष्ठलाई सम्झिँदै भावुक स्टास लेखेकीछिन् । हाल बेल्जियममा रहेकी स्वेताले सामाजिक सञ्जालमाफर्त आफनो स्वर्गीय श्रीमानलाई भावुक शैलीमा मन छुने स्टाटस लेखेकी हुन् ।
यस्तो छ उनले लेखेको स्टाटस :-
उहाँले भौतिक रुपमा संसारबाट बिदालिएको त्यो दिनमा धार्मिक मुल्य र मान्यतालाई आत्मसाथ गर्दै तिथी अनुसार (न की गते अनुसार )कर्मकाण्डको बिधी पुरा गर्ने गरेका छौ । अत : यस्पाली उहाँको ५ औ पुण्य तिथी आगामी २९ गते परेको छ, जनै पुर्णिमाको एक दिन अगाडि ।आफ्नो आत्मिय मान्छेलाई सम्झन कुनै बिशेष अवसर या दिन चाहिदैन । म त उहाँलाई हरेक पल, हरेक क्षण र हरेक दिन सम्झिरहेको हुन्छु । धार्मिक रितिरिवाज र परम्परालाई आत्मसाथ गर्ने कुरा भने अलग रह्यो जस्लाई तिथी अनुसार नै कर्मकाण्ड गर्ने प्रचलन छ । तर वास्तविक कुरा नबुझी कसैको भावनामा ठेस लाग्ने खालका समाचार बनाएर सम्प्रेशण गरिनु कहाँ सम्मको जायज हो ?
चक्कु, खुकुरी तलवार र काँडाहरु भन्दा पनि तिखो धार भनेको शब्दहरुनै हुन । हतियारको धारले शरीरमा चोट पुर्‍याउँछ जस्को उपचार पनि सजह छ तर शब्दको धारले सिधै मन र मस्तिस्कमा चोट पुर्‍याउँछ, जस्को उपचार कठिन छ । कलमको माध्यमद्वारा शब्द कोरिरहँदा त्यो शब्दले कस्लाई र कुन हदसम्म प्रहार गर्छ भनेर नसोच्नु कती सम्मको लापर्वाही होला !
यसरी बुझ्दै नबुझी समाचार प्रकासित गर्दा कस्को मनमा के चोट पर्छ भन्ने ख्याल नगर्नु र जस्को बारेमा समाचार बनाएको हो त्यो ब्यक्तिसंग कुनै किसिमको संवाद, छलफल वा सत्यतथ्य के हो त्यस्को खोजतलास नगरि हचुवाको भरमा समाचार लेख्नुलाई कस्तो किसिमको पत्रकारिता भन्ने ? कसैको भावनासंग खेल्ने अधिकार कोही कसैलाई छैन ।
यतिखेर म मेरो स्वर्गिय पतीको सम्झनामा स्थापित श्वेताश्री फाउण्डेसन मार्फत बनिरहेको माझी बस्तिको लागि आर्थिक स्रोत जुटाउन बेल्जियम आईपुगेको छु तर मेरो अनुपास्थितिमा केही अनलाईन मिडिया मार्फत म र मेरो स्वर्गिय पती बिचको प्रेमलाई ‘जोक’ बनाउने प्रयास गरेको पाएँ कृपया यस्तो घिनलाग्दो खेल नखेलीदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु ।
Prevविश्वमै दुर्लभ र विषालु मानिने किङ कोब्रा धरानमा भेटियो, गरियो तुरुन्तै उद्दार